Tsy azo atao ny data tonga lafatra | Martech Zone
Ny marketing amin'ny vanim-potoana maoderina dia zavatra mahatsikaiky; raha toa ka mora kokoa ny manara-maso ny fampielezan-kevitra momba ny varotra an-tranonkala noho ny fampielezana nentim-paharazana, be dia be ny fampahalalana azo omena ka afaka malemy ny olona amin'ny fikatsahana angon-drakitra misimisy sy vaovao marina 100%. Ho an'ny sasany, ny habetsaky ny fotoana voatahiry amin'ny fahafahanao mamantatra haingana ny isan'ny olona nahita ny dokambarotra an-tserasera nandritra ny volana iray dia nolavina tamin'ny fotoana lanjan'izy ireo manandrana mijery ny antony tsy dia mitombo ny isan'ny loharanom-pifamoivoizany.
Ankoatry ny tsy fahaizan'ny data tonga lafatra dia misy ihany koa ny habetsaky ny angona izay manelingelina. Raha ny tena izy, misy zavatra betsaka ka mety ho sarotra indraindray ny mahita ny ala ho an'ireo hazo. Mila mijery ny tahan'ny fiakarana na ny tahan'ny fivoahana ve aho? Azo antoka fa ny vidin'ny pejy dia singa iray ilaina amin'ny angon-drakitra, saingy misy ve ny fanovana tsara kokoa izay afaka manome maodely hoe ohatrinona ny pejy misy atiny omena amin'ny famitana tanjona amin'ny Internet? Tsy misy farany ny fanontaniana ary toy izany koa ny valiny. Mety hilaza aminao ny manam-pahaizana iray, "miankina fotsiny izany", fa ny olona manana ny lohany amin'ny zavon'ilay nomerika Analytics mety mieritreritra fa misy isa maromaro tonga lafatra raha jerena fotsiny izany rehetra izany.
Amin'ireto lafiny roa ireto dia mora ny valiny - manaova tsy fahatanterahana satria tsy azo atao ny data sy / na ny data feno. Ny iray amin'ireo tovolahy miresaka tsara momba izany dia i Avinash Kaushik. raha tsy fantatrao ny anarana dia mpanakanto mpivarotra be indrindra any New York Times izy, iray amin'ireo lohan'i Google ary ao amin'ny satan'ny oniversite maro. Ny bilaoginy, ny Occam's Razor, dia volamena madio ho an'ny mpandalina data maoderina ary vao haingana aho no nifanena tamin'ny iray tamin'ireo lahatsorany taloha antsoina hoe, Dingana 6 hivoarana amin'ny maodelin-tsainao. Ao anatin'izany no nilazalazany ny hevitra fa tsy misy andiana data tonga lafatra ary mila manaraka làlana tsotra kokoa mankany amin'ny "Data Virtuous" ny olona.
Amin'ireo teboka tsara rehetra nolazainy, ny iray manasongadina indrindra dia:
… Ny asanao dia tsy miankina amin'ny angona misy fahamendrehana 100% amin'ny tranonkala. Ny asanao dia miankina amin'ny fanampiana ny orinasanao hifindra haingana sy hieritreritra tsara.
Amin'ny fotoana manaraka anao hamenoana ny Analytics, tadidio fotsiny fa raha miasa miaraka amina angon-drakitra tsara ianao ary manaraka fanao tsara indrindra, dia tokony ho vonona handray fanapahan-kevitra momba ny fomba handrosoana ianao. Satria na inona na inona ezaka be dia be azonao ampiasaina amin'ny fikatsahana angon-drakitra feno sy tonga lafatra, ny fotoana laninao nanaovana izany dia mety ho lany amin'ny fiasana amin'ny taham-panovana, mamorona fitsapana fizarazarana vaovao, sns. Fantatrao, ireo zavatra izay hanampy ny orinasanao mitombo ary tazomy ny asanao.
Te hanomboka resaka? Mankanesa aty amiko ao amin'ny Twitter @sharpguysweb.
Tags: Analyticsfiovam-ponyDatamailaka Marketingmivadikafotoana
Mpankafy teknolojia izay nanangana tranokala nandritra ny 15 taona, niara-niasa tamin'ny fanolorana SaaS nandritra ny 6 taona, ary miorim-paka amin'ny basikety Indiana University hatramin'ny faha-2 taonako.